स्वास्थ्य – List Khabar
19 hours ago स्वास्थ्य 0
२५ वर्षको उमेरमा गर्भवती हुँदा सजिलो मात्र हुँदैन, आमा र शिशु दुबैका लागि सुरक्षित पनि हुन्छ । तर, आ’जभोली प्रायः महिला अध्ययन र करिअरको पछाडि लाग्दा ३५ वर्ष पुगेपछि मात्र बच्चा जन्माउने सोच बनाउँछन् । अर्थात् सन्तान भन्दा करिअर र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । का’बु बाहिरको परि’स्थितिका …
1 day ago स्वास्थ्य 0
काठमाडौँ । सामान्यतः हामीले साना तिना स्वास्थ्य समस्यालाई खासै ध्यान दिदैनौँ। यसको पहिलो कारण हो, व्यस्त जीवनशैली र दोस्रो कारण हो लापरबाही। तर आज हामी आज एक यस्तो समस्याका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । जो देख्दा त सामान्य लाग्छ, तर यो गम्भिर रोगको संकेत हो। यदी तपाईको शरीरको कुनै भागमा निलो …
काठमाडौँ । हाम्रो समाजमा सपनालाई कतिपय संकेतको रुपमा पनि बुझिने गरिएको छ । सपनालाई राम्रो र नराम्रो भनेर पनि छुट्याउने गरिन्छ। डरलाग्दो वा खराब सपना देखेपछि त्यसले हामीमा चिन्ता पैदा गर्छ। यस्तो सपना देख्नुमा वास्तु दोष मुख्य कारक हुने शास्त्रमा उल्लेख छ। आज हामी तपाईलाई खराब सपनाबाट बच्ने केही उपायका …
काठमाडौँ । आजकलको दौडधुँपको जीन्दगीमा हामी आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान दिदैनौ । जसको कारणले पछि हामीलाई नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । धेरैजसो मानिस आफ्नो तौललाई घटाउन चाहान्छन् । आफ्नो तौललाई कम गर्न कैयौँ खर्च गरेर जिम गई पसीना बगाउछन् ताकीँ तौल घटोस् तर जति गरेपनि तौल घट्नेको नाम नै लिदैन। आउनुहोस् घरमै …
2 days ago स्वास्थ्य 0
काठमाडौँ । बढ्दो उमेरसँगै महिलामा यस्तो क्यान्सरको जोखिम हुन्छ। कतिपयमा वंशाणुगत कारण पनि यस्तो क्यान्सर लाग्ने गर्छ। त्यसैले आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यमा यस्तो क्यान्सर भएको अवस्थामा नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्न आवश्यक हुन्छ। स्तन, पाठेघर, मुख, आङ, फोक्सो र ग्यास्ट्रोइन टेस्टटिनलका क्यान्सर महिलामा बढी देखिने क्यान्सर हुन्। आज हामी महिलामा देखिने …
सा-वधान ! हात खुट्टा सँगै छालामा यस्ता परिवर्तन देखिए सचेत रहनुहाेला । अधिकांश के-शहरुमा ब्ल-ड क्ल-टलाई राम्रो मानिन्छ जब हामीलाई चो-ट लाग्छ, तब क्ल-ट-ले र-गत बग्नबाट रोक्छ । यद्यपि, यही क्ल-ट कहिलेकाहिं त्यसबेला हुन थाल्छ, जतिबेला यसको आवश्यक हुँदैन । ब्ल-ड क्ल-ट त्यसबेला ख-तरनाक हुन्छ, जब यो मांसपेशि नजिक न-शामा …
4 days ago स्वास्थ्य 0
बिबाहपछि अक्सर महिलाहरु मोटाउछन् । किन ? यसका एउटा मात्र कारण छैन । सामान्त बिबाहअघि युवतीहरुले आफ्नो फिगरमा बढी ख्याल गर्छन् । उनीहरु स्लिम देखिन रुचाउँछन् । राम्री देखिनुपर्छ भन्ने मानसिकताले पनि उनीहरु फिगर मेन्टेन गरिरहेका हुन्छन् । चाहे खानपानमा कटौती गरेर होस् वा व्यायाम गरेर, फिट एन्ड फाइन रहन …
5 days ago स्वास्थ्य 0
काठमाडौ । नेपालमा परिक्षण नहुने भएकाले भारतमा परिक्षणका लागि पठाइएको नमुनाहरु सबैमा नयाँ भेरियन्ट पुष्टि भएको छ । भारतमा महामारीको रुप लिएको को रोनाको नयाँ भेरियन्ट नेपालमा पनि बढ्दो क्रममा छ । नेपालमा नयाँ भेरियन्टको परिक्षण गर्ने समेत ब्यवस्था छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भारतको नयाँदिल्ली पठाएका सबै ४७ …
काठमाडौँ । कुनै व्यक्तिमा भास्कुलर सिस्टम (रक्तप्रवाहमा महत्वपूर्ण भूमिका भएका धमनी र नसा) सम्बन्धी समस्या छ भने त्यसलाई भास्कुलर रोग भनिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा गरिने सर्जरीलाई भास्कुलर सर्जरी भनिन्छ। भास्कुलर सर्जरीका क्रममा धमनी र नसामा भएका क्षति र आएका समस्यालाई शल्यक्रियाका माध्यमबाट उपचार गरिन्छ। ओपन सर्जरीलाई भास्कुलर सर्जरी भनिन्छ भने …
साउन ४,काठमाण्डौ – पहिलो पटक नेपालमा नै क्यान्सरविरुद्धको औषधि उत्पादन सुरु गरिएको छ । टिचिङ फर्मा प्राइभेट लिमिटेडले नेपािलमै पहिलो पटक औषधी उत्पादन सुरु गरेको हो । यस अघि नेपामा क्यान्सर विरुद्धको औषधी भारत र तेस्रो देशबाट आउने गर्दथ्यो । टिचिङका कार्यकारी निर्देशक शैलेश वैद्यले सो कम्पनीले भारतको हैदराबादमा रहेको …